Daawo: XASAN SHEEKH oo tallaabadii uu FARMAAKO qaaday ku qeexay 'bilowga digtaatooriyad cusub' - Caasimada Online
Home Warar Daawo: XASAN SHEEKH oo tallaabadii uu FARMAAKO qaaday ku qeexay ‘bilowga digtaatooriyad...
Daawo: XASAN SHEEKH oo tallaabadii uu FARMAAKO qaaday ku qeexay ‘bilowga digtaatooriyad cusub’
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si xoog leh uga hor yimid digreeto uu madaxweyne Farmaajo maanta soo saaray oo xeerineysay dhaqan-galka dastuurka KMG, xilli dastuurka uu muddo xileedkiisa uu la dhammaanaya muddo xileedka baarlamaanka 10aad.
Farmaajo ayaa qoraal uu maanta soo saaray ku yiri “Iyadoo aan waxba loo dhimeyn Qodobka 136-aad ee Dastuurka KMG, Madaxweynuhu waxa uu dib-u-dhigay ansixinta dib-u-eegista Dastuurka, waxa uuna Baarlamaanka 11aad u gudbiyey qabyo qoraalka ay soo diyaariyeen Guddiga Madaxa bannaan ee Dib-u-eegista Dastuurka.”
Xasan Sheekh ayaa sheegay in Farmaajo uu ka tallaabay sharciyaddiisa islamarkaana u dhacay tan baarlamanka.
Xasan Sheekh ayaa 12-kii bishan u diray madaxweyne Farmaajo iyo guddoonka labada Aqal ee baarlamaanka qoraal uu ku xusuusinayo dhammaadka muddada dhaqangalka dastruurka iyo waddada loo marayo xeerintiisa si loogu wareejiyo baarlamaanka soo socda.
Xasan ayaa u arka in wax ka bedelka iyo nidaaminta waxyaabaha dastuurka la xiriira ay xaq u leeyihiin labada gole ee baarlamaanka oo wada jir ah, balse faragelinta madaxweynaha ay ka dhigan tahay billowga digtaatooriyad iyo burburinta nidaamka dimuqaraadiga ah.
Ilo xog ogaal ah oo ku dhow Villa Somalia ayaa xaqiijiyay in madaxweynaha oo kulan la yeeshay guddoonka golaha shacabka uu ka codsaday inaan la qaban kulan guud oo uu golaha yeesho, isaga oo ka walwal qaba in ay ka soo baxaan waxyaabo kale oo ku saabsan doorashada oo ay kamid noqon karaan mowshin isaga ka dhan ah.
Xasan Sheekh ayaa dhinaca kale waxa uu guddoonka labada gole ee baarlamaanka ugu baaqay in ay raacaan habraaca saxda ah ee howsha baarlamaanka isla markaana ay dastuurka ilaaliyaan.
Hoos ka daawo Xasan Sheekh